Wasiirka waxbarashada K/Galbeed oo xariga ka jaray xarun waxbarasho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka waxbarashada K/Galbeed oo xariga ka jaray xarun waxbarasho
Wasiirka waxbarashada K/Galbeed oo xariga ka jaray xarun waxbarasho
Mashaariic horumarineed oo ku aadan hirgelinta adeegyada bulshada sida waxbarashada ayaa ka socda gobolka Bokool,tan iyo markii maleeshiyada Alshabaab laga saaray inta badan gobolkaasi Bokool,waxaana si wada jir ah u wada maamulka Koonfur Galbeed iyo kan gobolka Bokool.
Munaasabad xariga looga jaray dib udayactir lagu sameeyey Buulow Primary School oo kamid ah mashaariicdaasi horumarineed waxa ka soo qeyb galay Wasiiro ka tirsan maamul goboleedka koonfur Galbeed, Maamulka Gobolka Bakool kan degmada Xuddur mas’uuliyiinta waxbarashada iyo bulshada inteeda kale.
Ugu horey waxa munaasabadda ka hadlay guddoonka waxbarashada ee degmada Xuddur iyo waalidiintii munaasabadaa ka soo qeybgalay, waxayna aad u bogaadiyeen mashaariiicdan oo lagu hormarinayo waxbarashada gobolka Bokool.
Maxamed Macalin Guddoomiyaha Degmada Xuddur iyo Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Snake oo ka hadlay dafurka munaasabada ayaa wasaarada waxbarashada ka codsaday in ay dardar geliyaan baahiyaha waxbarasho oo degaankaan ka jirta iyagoona xusay in haatan bulshada ay u soo jeesatay dhinaca waxbarashada.
Ugu dambeyntii Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar iyo Wasiirka wasaaradda Garsoorka iyo Cadaalada Sheekh Xasan Ibraahim Lubuur,waxayna bulshada reer xuddur ku amaaneen sida wada jirka ah oo ay uga qeyb qaanadayaan hormarka dalka, wasiirka waxbarashada ayaa balanqaaday in ilaa sedex iskuul oo magaalada ku yaala wasaaradda ay ugu deeqeyso agabkii waxbarasho oo dhameystiran.
“Ka maamul ahaan waxaan ku faraxsan,naya oo aan ku amaanaynaa shacabka kunool gobolka Bokool,gaar ahaan magaalada Xudur sida ay ugu diyaarsan yihiin ka qeybqaadashada horumarinta adeegyada bulshada ee deegaanadan,anada ka maamul ahaan waxaan bal;an qaadaynaa in aan idin keeno agabyada ay u baahanyihiin xarumaha waxbarasho ee kuyaala deegaanka,wanaa talaabo wanaagsan”. Ayuu yiri Wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed.
Gobolka Bokool ayaa kamid ah gobolada haatan ka soo kabsanaya dhibaatooyinki ay shacabku ku reebeen maleeshiyada Alshabaab,iyadoo haatan ay socdaan mashaariic horumarined oo kaladuwan,taasi oo ay qeyb ka qaadanayaan dadweynaha.
Previous articledareen iyo argagax laga muujiyey gabar 10 jir ah oo ugeeriyootay gudniinka fircooniga ah
Next articleDowladda Soomaaliya oo soo saartay warsaxaafadeed ku aadan gulufka ka dhanka ah Alshabaab